कोरोना कहर: जापानमा संकटकाल घोषणा गरिदै, के हाेला नेपालीहरूकाे अवस्था? – PathivaraOnline
Home > समाचार > कोरोना कहर: जापानमा संकटकाल घोषणा गरिदै, के हाेला नेपालीहरूकाे अवस्था?
टोकियो, जापान, २७ फागुन । चीनको बुहानबाट फैलिएको कोरना भाइरसको संक्रमण विश्वव्यापीरुपमा फैलन थालेपछि विश्वका विभिन्न देशहरुले सतर्कताको अन्तिम उपाय अबलम्बन गर्ने तयारी गरेका छन् । कतिपय देशले विदेशी नागरिकको प्रवेशमा रोक लगाएका छन् भने कतिपयले देश प्रवेश गर्नेहरु माथिको निगरानी बढाएका छन् । यसैक्रममा ९० हजार भन्दा बढी नेपाली बसोबास गरिरहेको जापान भने संकटकाल लगाउने अन्तिम अबस्थामा पुगेको छ ।
अथक प्रयासका बाबजुत पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणमा आउन नसकेपछि जापान सरकारले संकटकाल लगाउन सक्ने गरि बिधेयक पारित गरेको छ । विधेयक पारितसंगै अब आवश्यक परे प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले संकटकालको घोषणा गर्न सक्ने छन् । जापानमा अहिले सम्म १ हजार २ सय ५० जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको छ ।
जसमध्ये ५६ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ । जापानको सरकारी टेलिभिजन एन एच केले जनाए अनुसार कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या जापानमा १९ पुगेको छ । यसबीच ३४६ जना भने उपचार पछि घर फर्किएका छन् ।
दिन प्रतिदिन संक्रमितको संख्या बढ्दै जान थाले पछि जापानले विभिन्न ६२ देशका नागरिकलाई जापान प्रबेशमा कडाइ गर्ने निर्णयमा पुगेको छ । उसले ति देशहरुको सूची सार्वजनिक गर्दै जापान प्रबेशमा कडाइ गर्ने र आबश्यक परे प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरुलाई २ हप्ता क्वारेन्टाइनमा राख्न सक्ने सम्मको तयारी गरेको छ । यस अघि जापानले कोरिया, चीन लगायत ५ देशबाट हुने आवागमनलाइ पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
जापान सरकारले ६२ देशका नागरिकलाई आफ्नो मुलुक प्रबेशमा कडाइ गर्ने नीति अबलम्बन गरेपछि यसको मार नेपालीहरुलाई समेत पर्ने भएको छ । नेपालबाट बिभिन्न मुलुक हुँदै जापान प्रबेश गर्न चाहनेहरु भने जापान प्रबेश गर्न पाउने छैनन् भने सीधै जापान जानेहरु पनि कडा स्वास्थ्य निगरानीमा पर्ने छन् । साथै उनीहरुले जापान प्रबेश गर्दा आफु कोरोना सक्रमित नभएको प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ ।
आजै रातिदेखि सरकारी कार्यालय, बैंक, यातायातका साधन लगायत यी सबै बन्द हुने !